जीवनको सेरोफेरो: के सिकाउँछ विपश्यनाले
के सिकाउँछ विपश्यनाले
राम्रो राजनीति चेतना भएका एक अग्रजलाई मैले 'विपश्पना जाँदै छु' भन्दा उनले हकार्दै भनेका थिए, 'धत् ! क्षेत्रीको छोरा भएर, साधु हुन थाल्यौ कि क्या हो ?' उनले क्षेत्री शब्द उच्चारण गर्दै मलाई हो जस्तो लागेकै हो । तर, एकपटक भोगौं न कस्तो हुँदोरै'छ, 'साधु भए बालै भएन !' ठान्दै यसपटकको जाडो बिदामा उपत्यकाको उत्तरी भेगमा रहेको विपश्यना केन्द्र पुगें ।
सहरमा मेसिनजस्तो जीवन गुजारिरहेका युवायुवतीको जमात त्यहाँ भेटियो । १० दिन मौन व्रत बसेर अन्तरमन सफा गर्न आएका साधक/साधिकाहरूको भीडमा विदेशीहरू पनि थिए । सयजनाको भीडमा तीनपुस्ते उपस्थितिले मलाई विपश्नामा केही 'ग्य्राभिटी' छ, जसको मैले भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ झैं भयो ।
चराले सास फेरेकै शैलीमा दस दिन चुप बसेर
अन्तरमनलाई नियालेर बसियो । विपश्यना जानुअघि लोभ, मोह, अहंकार, भय, वासनाजस्तै विकार भरिने मनलाई यसअघि मैले धुलाउन तपोवन पुर्‍याएँ, विकासानन्द सुनें, थुप्रै गुरु/महाराजका प्रवचनका किताब पढें तर यसपटक विपश्यना नामको वासिङ मेसिनमा मनलाई छप्ल्याङ छुप्ल्याङ मज्जाले पखालें । त्यहाँ मन पखाल्दा पाएको आनन्द व्यख्या गर्न निकै शब्द खर्चिनुपर्ला ।
विपश्यनाको शाब्दिक अर्थ यस्तो छ । वि भनेको, 'गहिरो ।', पश्यना भनेको 'हेर्नु हो ।' आफूलाई गहिरो गरी हेर्ने कला नै विपश्यना हो । आनापाना विपश्यनाको पहिलो खुड्किलो हो । यो सास फेर्ने अभ्यास हो । यसमा सासको कसरत वा नियन्त्रण होइन सास जान्ने काम मात्रै हुन्छ । यही पुरानो विधिमा विपश्यना अडेको छ ।
दरबार छाडेर खोजमा निस्केका गौतम बुद्धले यस ज्ञानलाई २५ सय वर्षअघि बटुलेर उत्तर भारतमा प्रचारमा ल्याएका थिए । बुद्ध दर्शनहरूअनुसार, यो विद्या त्यसबेला भारत हुँदै वर्मा, थाइल्यान्ड, श्रीलंकालगायतका मुलुकमा फैलिएको थियो । गौतम बुद्धपछि भारतमा यो विधि बिस्तारै हराउँदै गएछ । तर, बर्मेलीहरूले यसलाई जतन गरिराखेका थिए । गुरुशिष्य परम्पराद्वारा सिकाइने यसलाई सन् १९६९ वर्माका गुरु सयाजी उवाखिनले भारतीय मूलका तर बर्मेली व्यापारी सत्यनारायण गोयन्कालाई पनि यो शिक्षा सिकाए ।
गोयन्काले पुनः यो विद्यालाई भारत र नेपालमा पुनस्र्थापित गरे । हाल मुम्बईमा बस्दै आएका गोयन्काले नेपालमा पहिलोपटक १९८१ मा काठमाडौंको आनन्दकुटी महाविहारमा विपश्यनाको शिविर सञ्चालन गरेका थिए । त्यही बेला बुढानीलकण्ठमा धर्मशृङ्ग स्थापना भयो । यतिबेला नेपालको इटहरी, वीरगन्ज, कीर्तिपुर, पोखरा, चितवन र लुम्बिनीमा विपश्यनाका केन्द्र छन् । जहाँ एक दिवसीयका साथै निःशुल्क खाने-बस्ने सुविधासहित १०, ३० र ४५ दिनका शिविर हुन्छन् ।
गोयन्काले शान्तिबारे संयुक्त राष्ट्रसंघले थालेका विभिन्न कार्यक्रममा विपश्यनालाई अन्तरमनको गहराइमा छिरेर आत्मनिरीक्षणको माध्यमले आत्मशुद्धि गर्ने साधना विधि भनेका छन् । उनी भन्छन्, 'विपश्यना मन र शरीरको मानसिक अपरेसन गर्ने विधि हो ।' वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइनले पनि मनोविज्ञानसँग जोडिएको यस विद्याकै कारण सायद भनेका थिए, 'संसारमा कुनै दिन गौतम बुद्धको यो धर्म अग्रस्थानमा हुनेछ ।' विपश्यनाको महत्त्व पछिल्लोपटक राष्ट्रहरूले पनि बुझ्न थालेका छन् । हाम्रो मुलुकमा त होइन तर भारतका कतिपय राज्यमा कर्मचारीहरूको मानसिक र शारीरिक विकासलाई बढाउन विपश्यना शिविर अनिवार्य भनिएको सुनिन्छ ।
विषेशतः तनावपूर्ण जीवनयापन गरिरहेका अनि आत्महत्याको बाटो रोज्नेहरूका लागि यो काइदाको छ । शिक्षामा रुचि नहुने, रिसालु स्वभावका अनुशासान गुमाउँदै गएकाहरूका लागि यो अमृतसमान छ । यसले झनक्क रिसाउनेहरूको मनलाई एकाग्र, दरिलो र स्मरण शक्ति बढाइदिन्छ । पहिलोपटकको अनुभवमै जीवनका पाइला, बोली र सोचाइमा 'इरर' भेटाउन सघाउने यस विद्याले भ्रम पनि रा्रमरी चिनाउँछ ।
गोयन्काले भनेअनुसार, अज्ञानका कारण हामीले जीवनमा धेरै धोका पाएका/पाउनेछौं । अज्ञानका कारण मनका धेरैथरी विकार जम्मा गर्छौं । मन नपरेका काम कुरा हुनेबित्तिकै मनमा धेरैथरी गाठा पार्छौं । तनाव उत्पन्न गछौर्ं । विकार जगाउँछौं र व्याकुल हुन्छौं । मन नपर्ने काम कुरा जीवनभरि भइरहन्छन् । त्यस्तै हामीले चिताएको जस्तो पनि सधैंभर भइरहन सक्दैन । एउटा पूरा हुँदा अर्को रहरले टाउको उठाउँछ । दोस्रो रहर पूरा भएपछि तेस्रो, तेस्रोपछि चौथौ यसरी रहरहरूले टाउको उठाउँदै गर्छन् । यो क्रम मानिसको जीवनभर भइरहन्छ । यसको सीमा नै छैन । तर सधैं मन परेकै हुन्छ भन्ने छैन । र यो सम्भव पनि छैन । यसमा पनि बाधा आउँछ । अड्चन आउनेबित्तिकै हामी व्याकुल हुन्छौं । मनमा गाँठा पार्छौं । जीवनभर यस्तै गछौर्ं । विकार पैदा गर । तनाव उत्पन्न गर । अनि हाम्रो सम्पूर्ण मन विकारले विकृत हुन्छ । गाँठाले शरीरका रेसारेसा भरिन्छन् । यस्तो व्याकुलताले हामी शरीरभरि राख्छौं । यति मात्रै होइन । अरूलाई पनि बाँड्छौं । आफू दुःखी हँुदा अरूलाई पनि दुःखी बनाउँछौं । वरिपरि जो/जो भेटिन्छन् ती सबैलाई दुःखी बनाउँछौं । न हामी शान्तपूर्वक बाँच्छौं न अरूलाई बाँच्न दिन्छौं ।
तर यो साधनाले मानिसको चित्तलाई विकारबाट मुक्त गर्छ । विकारबाट मुक्त भएको चित्तले 'कु' सोच्दैन । राम्रो सोचाइले जीवनलाई अँध्यारो गल्लीबाट उज्यालो राजमार्गतिर डोर्‍याउँछ । संसार बदल्न आफूलाई बदल्नुपर्छ भनेकै यही हो । अर्थात् धारणाले नै जीवनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दछ । मन बदलिनुलाई यस विद्यामा ठूलो उपलब्धि मानिन्छ ।
यो कला हिन्दु, मुस्लिम, जैन, क्रिसियन, सिख, फारसी जो सुकैका लागि आवश्यक छ । जीवन ठीकसँग बाँच्न जान्नुलाई यहाँ धर्म भनिन्छ । यहाँ भनिने धर्मले साम्प्रादायिक धर्म भनेको होइन । प्राकृतिकको कानुन, रीत, नियमलाई धर्म भनिएको हो । यो सबैमा समान लागू हुन्छ । कसैलाई भेदभाव गर्दैन । धर्म शब्द सम्प्रदायको प्रायवाची बनाइनु गलत रहेको विपश्यना विद्याले भनेको छ । यसले भन्छ, 'धर्म सार्वजनिक हुन्छ । यो कुनै जाति, सम्प्रदायको हुँदैन । यो बाटो सार्वजनिक हो । यो कसैको होइन ।' गोयन्काले पुस्तक र प्रवचनमा भनेका छन्, 'कतिपयले यसलाई गौतम बुद्धसँग जोडेर बुद्धिजम भन्छन् । तर यो सत्यको बाटो खोजी गर्ने प्राकृतिक नियम मात्रै हो, यसले आत्माको दर्शन गराउँछ ।' यसले मानिसलाई भूतकाल वा भविष्यमा होइन वर्तमानमा बाँच्न सिकाउँछ ।
विपश्यनाबारे बाटो देखाउने आचार्यहरूले यो विद्या 'प्रवचन सुनेर वा किताब पढेर जानिँदैन भनेका छन् । यस विद्याले स्थूलदेखि सूक्ष्म सत्यसम्मको अनुभूति गराउँछ । यसले कुनै देवीदेउता भगवान्को रूपलाई मान भनेको छैन । यसले आफूले आफूलाई हेर मात्रै भनेको छ ।
अहिलेसम्म धेरे सुनेको थिएँ । मन चञ्चल हुन्छ । जुन त्यही गएर भोगियो । मन कसरी दौडिन्छ । एकैछिन सँगै रहेको मन सूर्यको गतिभन्दा वेग भाग्दोरहेछ । १० दिन खुबै भाग्यो । कता पुग्यो पुग्यो । यसबारे लखेको भए सायद हजारौं पाना भरिन्थे होलान् । तर मुख्यगरी मन दुई स्थानमा भाग्दोरहेछ । एक भूतकाल अर्को भविष्यमा । कि पुराना अतीत सम्झने । कि त भविष्यका योजनामा रमाउने । मनको स्वभावलाई नियालेर उतार्न सायद सम्भवै नहोला । बितिसकेका क्षणलाई संसारको सबै सम्पत्ति खर्च गरे पनि पाइँदैन । भविष्य पनि वर्तमान बन्दासम्म त्यसमा बाँच्न सकिँदैन ।
१० दिन मोबाइल, अन्तरव्यक्ति सञ्चार, टीभी, इन्टरनेटबाट टाढा रहनु कठिन हो । त्यसमाथि एकै ठाउँमा दैनिक १३ घन्टा आँखा बन्द गरेर बस्नु झन् कठिन हो । मेरो अनुभवमा १० दिन 'समयका नाममा कि त दिन भई बित्यो कि त रात भई ।' अनिश्चयको बाक्लो कुहिरोमा बरालिएको कागजजस्तो जीवन जिइरहेका मजस्ता त्यहाँ मार्ग पहिल्याउन सक्दारहेछन् । होलिडे मनाउन भ्रमणमा निस्कनेहरूले यहाँ १० दिन बिताए पछुतो नहोला ।
Posted by Bishal Gautam at 2/06/2012
Labels: Guest Author, भ्रमण लायक ठाँउहरू, लेखनाथ, संस्मरण र नियात्रा
टुथ पाउडर उद्योग
लोडसेडिङ मुक्त नेपाल बनाउने सजिलो मन्त्र
चाट मसला । जल जिरा उद्योग
क्यान्सर पीडित बरिष्ठ नयूरो सर्जन डा. उपेन्द्र देबकोटा को निधन - क्यान्सर पीडित बरिष्ठ नयूरो सर्जन डा. उपेन्द्र देबकोटा को निधन काठमाडौं- वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन भएको छ। पित्त नलीको क्यान्सरबाट ...
वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन - काठमाडौं- वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन भएको छ। पित्त नलीको क्यान्सरबाट पीडित देवकोटाको सोमबार साँझ ५:३५ बजे वासवारी स्थित न्यूरो अस्पत...
Why has Nepal known as the Best Destination for Climbing Mountains? - Climbing mountains are the most adventurous event anyone who does in their life. In your life at the end, it does matter to explain that on earth how muc...